विश्पकपमा धेरै गोल प्रयास गर्ने खेलाडी नेमार, ४५० मिनेटमा कति प्रहार गरे ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
विश्पकपमा धेरै गोल प्रयास गर्ने खेलाडी नेमार, ४५० मिनेटमा कति प्रहार गरे ?
असार २४ गते, २०७५ - ०९:०१
मस्को । बलियो प्रतिद्वन्द्वी बेल्जियमसँग पराजित भएपछि ब्राजिल जारी विश्वकप फुटबलबाट बाहिरिएको छ । ब्राजिल बाहिरिएसँगै प्रतियोगिताका बाँकी खेलमा नेमारलगायत प्रतिभाशाली खेलाडीलाई देख्न पाइनेछैन । यद्यपि नेमार प्रतियोगिताका क्रममा आफूले हात पारेको एउटा उपलब्धिबाट रुस विश्वकपका बाँकी खेलहरूमा पनि जोडिई रहनेछन् । उनी प्रतियोगिताको क्वार्टरफाइनल चरणको खेलसम्म गोलका लागि सर्वाधिक प्रयास गर्ने खेलाडीको सूचीको शीर्ष स्थानमा छन् ।
अर्थात्, नेमारले रुस विश्वकपको शुक्रबार सम्मको खेलमा गोलका लागि अन्य कुनै पनि टोलीका कुनै पनि खेलाडीले भन्दा बढी प्रहार गरेका छन् । भलै उनको यो प्रयास टोलीलाई उपाधिसम्म डोहो¥याउन पर्याप्त बनेन । तर, उनी यही उपलब्धिमार्फत प्रतियोगितामा ब्राजिलको नेतृत्व गरिरहने छन् । नेमारले विश्वकपमा ब्राजिलले खेलेका सबै खेल खेले । त्यसमा उनले चार सय ५० मिनेट मैदानमा बिताए ।
त्यो अवधिमा उनले विपक्षी टोलीको पोस्टमा २७ पटक प्रहार गरेका छन् । यीमध्ये १३ प्रहारले पोस्टको दिशा लिएका छन् । पाँच प्रहार मात्र ‘अफ टार्गेट’ भएका छन् । यस्तै उनका नौ वटा प्रहारलाई विपक्षी रक्षक र गोलरक्षकले रोकिदिएका छन् ।
प्रतियोगिताका दौरान मैदानमा विपक्षी खेलाडीसँग सामान्य तरिकाले ठोकिँदासमेत अनावश्यक रूपमा लडेर नाटक गरेको भन्दै आलोचित बनेका नेमारले कम्तीमा प्रदर्शनबाट भने प्रशंसा कमाएका छन् । उनको यो उपलब्धिलाई अन्य कुनै खेलाडीले पछि पार्ने सम्भावनासमेत न्यून देखिएको छ । किनभने यो सूचीमा उनीभन्दा पछि रहेका पाँच खेलाडीको टोली यसअघि नै बाहिरिइसकेका छन् । एजेन्सी
असार २४ गते, २०७५ - ०९:०१ मा प्रकाशित